Annie Besant: Theosophist မှဘုရားမဲ့ဝါဒီဖို့ဝန်ကြီးရဲ့ဇနီး
Annie Besant, ယူမှားသူ
Annie Besant ၏ပုံပြင်: Theosophist မှဘုရားမဲ့ဝါဒီဖို့ဝန်ကြီးရဲ့ဇနီး
လူသိများ: Annie Besant ဘုရားမဲ့ဝါဒ, freethought နှင့် birthcontrol အတွက်သူမ၏အစောပိုင်းအလုပ်အဘို့နှင့် Theosophy လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသူမ၏နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်အတွက်လူသိများသည်။
ရက်စွဲများ: အောက်တိုဘာလ 1, 1847 - စက်တင်ဘာလ 20, 1933
"အသကျသာရှိစွာမှုတ်သွင်းခံရခြင်းနှင့်မှန်ကန်စွာသင်သည်သတ္တိရှိရှိနှင့် gallantly ယူလျှင်, သင်အမည်မသိသောပြည်သို့ထွက် setting ထားတဲ့အတွက်ကြက်သရေစွန့်စားမှုအဖြစ်အနိုင်ရများစွာသောတစ်ဦးရဲဘော်ရဲဘက်ကိုရှာတွေ့မှများစွာသောဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းတွေ့ဆုံရန်နေထိုင်ခဲ့နိုင်သည်ကိုမေ့လျော့ဘယ်တော့မှမ နှင့်များစွာသောစစ်တိုက်ရှုံးသည်။ " (Annie Besant)
Annie Besant: ဒီနေရာမှာအဘယ်သူ၏ Unorthodox ဘာသာရေးအမြင်များပထမဦးဆုံးဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့် freethought နောက်ပိုင်းတွင် theosophy ပါဝင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Annie Wood ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူမ၏လူလတ်တန်းစားကလေးဘဝစီးပွားရေးရုန်းကန်နေဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ သူမငါးအခါသူမ၏ဖခင်သေနှင့်သူမ၏မိခင်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖြည့်ဆည်းစေနိုင်ဘူး။ Annie ရဲ့အစ်ကိုများ၏ပညာရေးအတွက် paid သူငယ်ချင်းများ; Annie သူမ၏မိခင်ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကဖွင့်တဲ့အိမ်ကကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
19 မှာ Annie ငယ်ရွယ်ဗျာဖရန့် Besant လက်ထပ်နှင့်လေးနှစ်အတွင်းသူတို့တစ်တွေသမီးနှင့်သားခဲ့သညျ။ Annie ရဲ့အမြင်များကိုပြောင်းလဲစပြုလာသည်။ သူမသည်ဝန်ကြီးရဲ့ဇနီးအဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်သူမလိုအပ်နေဘူးသောသူသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့အသင်းသားတွေကိုကူညီဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူမဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ယုံကြည်ဖို့ရောကျ လာ. , ပိုမိုနက်ရှိုင်းလူမှုရေးအပြောင်းအလဲများချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုကျော်လွန်လိုအပ်ခဲ့သူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိထဲမှာပြောထားတယ်။
သူမ၏ဘာသာရေးအမြင်များလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။ Annie Besant သဟာယတက်ရောက်ရန်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါသူမ၏ခင်ပွန်းကသူတို့ရဲ့အိမ်မှာထဲကသူမ၏အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
သူတို့ကတရားဝင်ဖရန့်ကသူတို့သား၏ချုပ်နှောင်ထားဆက်ပြီးအတူကွဲကွာခဲ့သည်။ Annie နှင့်သူမ၏သမီး Annie မကြာမီ, ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေလုံးဝပျောက်ဖဲ့တစ် freethinker နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 1874 အတွက်လောကလူ့အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းရှိရာလန်ဒန်, ထံသို့သွားလေ၏။
မကြာခင်မှာပဲ Annie Besant သူ၏အယ်ဒီတာချားလ်စ် Bradlaugh လည်းအင်္ဂလန်အတွက်လောက (Non-ဘာသာရေး) လှုပ်ရှားမှုထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်အစွန်းရောက်စက္ကူ, အမျိုးသားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
အတူတူ Bradlaugh နှင့် Besant ထိုသူတို့အဘို့6လထောင်ဒဏ်တယ်ရသောမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုဆော်သြနေတဲ့စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည် "ညစ်ညမ်းသောရေဖျက်မှု။ " အဆိုပါဝါကျအယူခံအပေါ်မှောက်နှင့် Besant မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အခြားစာအုပ်, ပြည်သူ့အင်အားအဆိုပါဥပဒေရေးသားခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ကိုရှုတ်ချလူသိရှင်ကြားရှာအံ့သောငှါနဲ့သူတို့ရဲ့သမီး၏ချုပ်နှောင်ထားရဖို့ Besant ရဲ့ခင်ပွန်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1880 စဉ်အတွင်း Annie Besant သူမ၏လှုပ်ရှားမှုကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သူမသည်စကားပြောနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်စက်မှုဇုန်အခြေအနေများနှင့်လူငယ်စက်ရုံမိန်းမတို့အဘို့အနိမ့်လုပ်ခဆန့်ကျင်ရေး 1888 အတွက်ပွဲစဉ် Girls 'Strike ဦးဆောင်။ သူမသည်ဆင်းရဲသားကလေးငယ်များအတွက်အခမဲ့အစားအစာများများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအတွက်စပီကာအဖြစ်ဝယ်လိုအားကြီးနှင့်ဥပဒေနှင့်ကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုပိုမိုရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များအတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်ပြောသည်။ သူမသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တက္ကသိုလ်ကနေသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထိုမိနျးမပြောဆို freethought နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝေဖန်ရေးသားဖို့ဆက်ပြောသည်။ "ငါသည်ဘုရားသခင်၌မယုံကြည်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်" ဟုသူမကချားလ်စ် Bradlaugh နှင့်အတူ 1887 ခုနှစ်, ရေးသားခဲ့သည်တစ်ခုမှာလက်ကမ်းစာစောင်ကျယ်ပြန့်သည့် secularists နေဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသေးဘုရားမဲ့ဝါဒကိုခုခံကာကှယျအငြင်းပွားမှုများရဲ့အကောင်းဆုံးအနှစ်ချုပ်များထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည်။
1887 ခုနှစ်တွင် Annie Besant တွေ့ဆုံပြီးနောက် Theosophy ကူးပြောင်း Madame Blavatsky , 1875 အတွက်စပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖူးသူတစ်ဦး spiritualist ။
Besant လျင်မြန်စွာအသစ်ဘာသာရေးအကြောင်းမရှိမှသူမ၏ကျွမ်းကျင်မှု, စွမ်းအင်နဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ Madame Blavatsky Besant ရဲ့အိမ်မှာ 1891 ခုနှစ်တွင်အနိစ္စရောက်လေ၏။ အဆိုပါစပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်တဦးတည်းဌာနခွဲကသမ္မတအဖြစ် Besant နှင့်အတူနှစ်ခုအကိုင်းအခက်သို့ခွဲထွက်ခဲ့သည်။ သူမသည် Theosophy များအတွက်ရေပန်းစားစာရေးဆရာနှင့်စပီကာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မကြာခဏသူမ၏ theosophical အရေးအသားအတွက်ချားလ်စ် Webster Leadbeater နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
Annie Besant Theosophy မှအခြေခံခဲ့ကြသည်ပေးသောဟိန္ဒူအတွေးအခေါ်များ (Karma, ဝင်စား, နိဗ္ဗာန်) ကိုလေ့လာဖို့အိန္ဒိယသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမ၏ Theosophical စိတ်ကူးများလည်းသတ်သတ်လွတ်ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်သူမ၏ဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူမသည်ဗြိတိန်မဲပေးပိုင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အမျိုးသမီးမဲပေးပိုင်များအတွက်အရေးပါသောစပီကာအတွက်တက်ကြွစွာကျန်ရှိနေသေးသော, Theosophy သို့မဟုတ်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ပြောဆိုရန်မကြာခဏပြန်လေ၏။ သူမ၏သမီးနှင့်သားသူနှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါ လာ. , ဘယ်မှာအိန္ဒိယအတွက်သူမကအိန္ဒိယပြည်ထဲရေးနည်းဥပဒေအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်လှုပ်ရှားမှု့များအတွက်ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း interned ခဲ့သည်။
သူမသည် 1933 ခုနှစ်ဒအတွက်သူမသေဆုံးသည်အထိအိန္ဒိယတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။
လူတွေကသူမ၏၏ထင်သောအရာကိုအနည်းငယ်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့သူတစ်ဦးကယူမှားသူအဖြစ်, Annie Besant သူမ၏စိတ်ကူးများနှင့်အသည်းအသန်ကတိကဝတ်များအတွက်အများကြီးစွန်။ mainline ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေသင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဇနီးအဖြစ်, အစွန်းရောက် freethinker, ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားရန်, Theosophist ကထိကနှင့်စာရေးဆရာရန်, Annie Besant သူမ၏နေ့၏ပြဿနာများနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများပြဿနာများသူမ၏သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်သူမ၏ယုတ္တိစဉ်းစားတွေးခေါ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
Annie Besant အပေါ်ဗစ်တိုးရီးယားက်ဘ်ရဲ့အစုအဝေး
သတ်သတ်လွတ်အပေါ် Annie Besant
Madame Blavatsky (HP က Blavatsky)
Madame Blavatsky နှင့်စပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက် ပတ်သက်. ဗစ်တိုးရီးယား Web ပေါ်ရှိပစ္စည်းရန်နှင့်စပါးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေချေပလွှာ
Author: Jones ဂျွန်ဆင် Lewis က
ခေါင်းစဉ်: "Annie Besant, ယူမှားသူ"
ဤ URL: http://womenshistory.about.com/od/freethought/a/annie_besant.htm
Ida Tarbell: Muckraking သတင်းထောက်, ကော်ပိုရိတ်ပါဝါ၏ဝေဖန်မှုများ
သောအသွင်မာရိတစ်ဦးအလယ်ခေတ်ပါဝါ Player ကိုခဲ့
ဗာဂျီးနီးယား Apgar ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ခါးသီးမှုရှောင်ကြဉ်ပါ3အကြောင်းရင်းများ
သင်လိုအပ်သည့် Tiny မူလစာမျက်နှာ Build ကူညီပါ 15 စာအုပ်များ
အာဖရိကန်အမေရိကန်နက္ခတ္တဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Banneker ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ထိပ်တန်းဗာဂျီးနီးယားကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် ACT ရမှတ်
အဘယ်အရာကို Damocles ၏ဓားအားဖြင့် cicero ကိုဆိုလိုသလဲ
Franco-Prussian စစ်ပွဲ: Dreyse အပ်ဂွန်
Python ရဲ့ String Templates ကို
ဘရာဇီး၏ဧကရာဇ် Pedro II ကို
Armadillo အကြောင်း 10 အချက်အလက်
Dayton GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
"Détruire" (ကိုဖွိုဖကျြဖို့) Conjugate လုပ်နည်း
တစ်ဦးလျင်မြန်စွာ Reiki ကုသမှု Give ရန်ကဘယ်လို
နားလည်မှု Gaslighting နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု